China DL-Panthenol Powder ifektri nabakhiqizi | Y&R
I-DL-Panthenol iyi-Pro-vitamin ye-D-Pantothenic acid (I-Vitamin B5) yokusetshenziswa emikhiqizweni yokunakekelwa kwezinwele, isikhumba kanye nezinzipho. I-DL-Panthenol iyingxube ye-racemic ye-D-Panthenol kanye ne-L-Panthenol.DL Panthenol, iyisilungisi sezinwele esaziwayo esibuyisela ukucwebezela nokucwebezela ezinweleni ezibuthuntu kuyilapho futhi sithuthukisa amandla aqinile. Ukwengeza, i-DL-Panthenol iyi-ejenti yokulungisa isikhumba & ne-moisturizer esebenzayo.
Ikhodi Yomkhiqizo: I-YNR-DL100
Omqondofana: DL Panthenol, Provitamin B5, Panthenol, DL ifomu
Inombolo ye-CAS: 16485-10-2
I-DL-Panthenol iyi-humectants enhle, enefomu lempushana emhlophe, encibilika emanzini, otshwaleni, ipropylene glycol.I-DL-Panthenol waziwa nangokuthi I-Provitamin B5,edlala indima ebalulekile ekuhlanganiseni kwe-metabolism yomuntu.Ukuntuleka kukaVithamini B5 kungabangela izifo eziningi zesikhumba.DL-I-Panthenol isetshenziswa cishe kuzo zonke izinhlobo zokulungisa izimonyo.DL-I-Panthenol inakekela izinwele, isikhumba nezinzipho.Esikhumbeni, i-DL-Panthenol iyi-humectants ejulile yokungena.I-DL-Panthenol ingakhuthaza ukukhula kwe-epithelium futhi inomphumela we-antiphlogistic ukukhuthaza ukuphulukiswa kwesilonda.Ezinweleni, i-DL-Panthenol ingagcina umswakama isikhathi eside futhi ivimbele ukonakala kwezinwele.I-DL-Panthenol ingajiyisa izinwele futhi ithuthukise ukucwebezela kanye ne-sheen.Ekunakekelweni kwezinzipho, i-DL-Panthenol ingathuthukisa ukugeleza kwamanzi futhi inikeze ukuguquguquka.Ivame ukusetshenziswa emikhiqizweni yokunakekelwa kwesikhumba nezinwele engcono kakhulu, yengezwe kuma-conditioner amaningi, okhilimu ,kanye nezinto zokugcoba.Ingasetshenziselwa ukwelapha ukuvuvukala esikhumbeni, yehlise ububomvu futhi yengeze izinto ezithambisayo kuma-creams, ama-lotions, izinwele nemikhiqizo yokunakekelwa kwesikhumba.
Ukuhlonza A Ukumuncwa kwe-infrared
Ukuhlonza B Kuvela umbala oluhlaza okwesibhakabhaka ojulile
Ukuhlonza C Kuvela umbala obomvu o-purplish ojulile
Ukubukeka Impushana emhlophe ehlakazeke kahle
Ukuzungezisa okuqondile -0.05°~+0.05°
Ibanga elincibilikayo 64.5℃~68.5℃
Ukulahlekelwa Ekumisweni Hhayi ngaphezu kuka-0.5%
Aminopropanol Hhayi ngaphezu kuka-0.1%
Izinsimbi Ezisindayo Hhayi ngaphezu kuka-10 ppm
Yehliswa kabusha ekushiseni Hhayi ngaphezu kuka-0.1%
I-DL-Panthenol powder incibilika emanzini futhi iwusizo ikakhulukazi ekwakhiweni kokunakekelwa kwezinwele, kodwa ingasetshenziselwa nokunakekela isikhumba nezinzipho. Le vithamini ivame ukubizwa ngokuthi i-Pro-Vitamin B5. Izonikeza umswakama ohlala isikhathi eside futhi kuthiwa yandisa amandla e-shaft yezinwele, kuyilapho igcina ubushelelezi bayo bemvelo nokukhanya; olunye ucwaningo lubika ukuthi i-panthenol izovimbela ukulimala kwezinwele okubangelwa ukushisa ngokweqile noma ukomisa ngokweqile izinwele nesikhumba. Ibeka izinwele ngaphandle kokwakheka futhi inciphisa ukulimala okuvela emaphethelweni ahlukene. I-Panthenol igxilisa isikhumba ngokujulile, isiza ukuvimbela ukulahlekelwa umswakama wesikhumba ngenkathi ithuthukisa ukunwebeka kwesikhumba nokuvama, okusiza ukwehlisa ijubane nokunciphisa izimpawu zokuguga. Kanye nalokhu, kusiza ukuqinisa nokukhipha ithoni yesikhumba ngokukhiqizwa kwe-acetylcholine. Okuvame ukungezwa esigabeni samanzi sokwakheka kwezimonyo, kusebenza njenge-Humectant, i-Emollient, i-Moisturizer ne-Thickener.
1. Ilungisa futhi iqinise izinwele ezilimele, iqinise izinwele, inciphise iziphetho ezihlukene futhi ikhulise amandla ezinwele eziqinile.
2. Ivuselela ukuphola kwesilonda. Kufunwa i-synergy ne-zinc oxide.
3. Ithuthukisa ukulungiswa kwesithiyo sesikhumba futhi inciphise ukuvuvukala ngemva kokucasuka kwe-sodium lauryl sulphate.
4. Umsebenzi wokulwa nokuvuvukala. Ingakhuphula i-sun-protection factor (SPF).
5. I-Panthenol ikhuthaza ukwanda kwe-dermal fibroblasts futhi ingasheshisa ukuguqulwa kwamaseli.
7. Iwumswakama ongenelayo. Ingakwazi ukungena futhi inikeze amanzi izinzipho nezinwele.
8. Ivikela izindebe ezindebeni ze-herpes ezibangelwa ilanga.
Okwedlule: I-Carbomer 941
Olandelayo: I-Carbomer 980